शालिकराम पुडासैनी प्रकरण: प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो अश्मिता कार्की ! || सुनौलो नेपाल
शालिकराम पुडासैनी प्रकरण: प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो अश्मिता कार्की !
साउन ३० काठमाडौं प्रहरीले पत्रकार शालिकराम प्रकरणमा दोषी भएको आरोपमा उनले छोडेको भिडियोका आधारमा अस्मिता कार्कि लाई भर्खरै पक्राउ गरेको छ । कार्कीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले काठमाडौंबाट बिहीबार पक्राउ गरेको हो। अस्मितालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला प्रहरीको टोलीले नियन्त्रण गरी भरतपुर लगेको हो। कार्की पक्राउ परेसँगै प्रहरीले रवि र युवराजमाथि पनि निगरानी बढाएको छ। स्रोतका अनुसार अस्मितालाई रविकै समूहका सदस्यले नियन्त्रणमा राखेका थिए। तर प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेर चितवन लगेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी दान मल्लले पुडासैनी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढिसकेकाले रवि र युवराज पनि प्रहरीको निगरानीमा रहेको बताएका छन्। हाम्रो अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ पुडासैनीले नाम लिएका तीनैजना पक्राउ पर्छन् यसमा कुनै सन्देह छैन मल्लले भने पुडासैनीको मोबाइल र त्यसमा रहेका अडियो भिडियो ल्याव परीक्षणपछि बिहीबारै चितवन पुगेपछि अनुसन्धानले अझै तीव्रता पाउँछ।
हामी यसमा कुनै कमजोरी नगरी अनुसन्धान गर्छौँ। कसैको दबाब या प्रभाव परेर प्रहरीले कारवाही रोक्दैन। निधनअघि शालिकरामले खिचेको भिडियोमा रवि लामिछाने युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीका कारण आफूले यस्तो गर्नुपरेको कुरा उल्लेख गरेका थिए।
भिडियो सार्बजानिक भाई सकेपछि सुनौलो नेपालले पुडासैनीका दाजुभाईसंग गरेको कुराकानी हेर्नुस
बिहि, साउन ३०, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस